Ugbo Franchises maka ire | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Ugbo Franchise
Franchises mara mma
Ugbo ahihia ohuru ohuru
Pesdị Ugbo Franchise
Enwere ohere dị iche iche ị na-elekọta akwụkwọ nri dị gburugburu ụwa. Gba ubi bụ ihe na-eto eto ma bụrụkwa ihe dị mma ịsị na ọ bụghị onye ọ bụla nwere oge na ndụ ha kwa ụbọchị iji lekọta ahịhịa ha ma kwachaa ihe ha na-eme. Luckily, ọtụtụ franchines nke osisi dị na ya pụtara ị ga-ahụ ihe mgbe ọ bụla masịrị gị. Na Franchiseek, anyị achịkọtala ndepụta nke ụdị aha osisi a ma ama nke ọma.
Lawn Nlekọta Franchise - franchise lawn na-elekọta ụdị ahịa azụmaahịa ebe franchisees na ndị ọrụ ha ga-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ahịa. Nke a gụnyere idozi ọrụ, ndozi ya na ịdọbi ahịhịa.
Okirikiri ala Franchises - franchises ndị a na-abụkarị ọrụ ubi na idebe ihe ngosi dị anya nke ubi onye ahịa n'agbanyeghị oke ma ọ bụ obere.
Wuru Lawn Franchises - franchise ndị dị ka Trulawn na-ahụ maka nrụnye ebe ana-akwọ mụrụmụrụ maka obere ogige ma ọ bụ nnukwu ogige obodo.
E nwere ọtụtụ ụdị osisi ọka ndị ọzọ metụtara ihe ọkụkụ dịka ngọngọ osisi, iwepu ihe aka na ya, na ogwe osisi. N'oge oge udu mmiri na udu nmiri, ọtụtụ osisi ọkụ ubi na-ewepụtakwa ọrụ dị ka ọsụsọ na nchedo anwụrụ ọkụ dị otú a. Chọgharịa ihe ndekọ zuru oke nke franchiseek Franchiseek n'okpuru.
A na-enyekarị franchise ubi imeghachi ego ebe onye ahia gha choro ka ị laghachite n’oge.
Won'tgaghi echegbu onwe gi banyere isoo na asusu ndi ozo nke aha ugbo gi, n'ihi na franchisor ga enyere aka na ntinye aka. E kwuwerị, ihe ịga nke ọma gị bụ ha ihe ịga nke ọma. Ha chọrọ ka ị nweta n'ihi na ị na-azụ ahịa n'okpuru aha ika ha, ha ga-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma. Na mgbakwunye, ọtụtụ franchise na-enye ọzụzụ zuru oke na nkwado na-aga n'ihu na-apụta na ị nwere ike ọ gaghị adịrị gị mkpa ọhụụ ọ bụla maka ịkọ ubi. Naanị echiche ziri ezi na ịdị njikere imezu.
Otu uru dị na aha a na-elekọta ubi, bụ na azụmahịa gị maka onwe gị, mana ọbụghị n'onwe gị. N'adịghị ka mmalite azụmaahịa, otu mkpụrụ osisi na-akọ ubi bụ ezigbo ego ma gosipụtara nke ọma n’ahịa azụmaahịa nke emepụtagharịrị gafee ọtụtụ franchisees na ókèala ha.
Chọgharịa na ndepụta nke Ugbo Franchises n'okpuru.